मञ्जुश्रीको खुद नाफा साढे ४ गुणा बढ्यो
माघ १४, काठमाडौं (अस) । मञ्जुश्री फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युशन लिमिटेडको २०७२/७३ आवको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा साढे ४ गुणा बढेर रू. १ करोड ९१ लाख पुगेको छ । खुद ब्याज आम्दानी ७१ दशमलव ८९ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा साढे ४ गुणा बढ्नाले खुद नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
कम्पनीले रू. २ अर्ब ९ करोड कुल निक्षेप सङ्कलन गरी रू. १ अर्ब ७६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । सीडी रेशियो ७१ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैङ्कको प्रावधानअनुसार कम्पनीले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने देखिन्छ । लगानी ४ गुणा बढाएर रू. ४ करोड पु¥याइएको छ । कर्मचारी खर्च ३० दशमलव ३९ प्रतिशत, अन्य सञ्चालन खर्च १ दशमलव २० प्रतिशत र कुल सञ्चालन आम्दानी ३६ दशमलव ५४ प्रतिशत बढेको छ । ब्याज आम्दानी ४१ प्रतिशत र ब्याज खर्च २८ दशमलव ७९ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति १ दशमलव ३९ प्रतिशत बढेर रू. १ करोड २२ लाख र अन्य सम्पत्ति ३ गुणा बढेर रू. १६ करोड पुगेको छ ।
गत आवमा रहेको रू. ५४ लाख खराब कर्जा उठाउन कम्पनी व्यवस्थापन सफल भएको छ । पूँजी कोष लागत ७ दशमलव २ प्रतिशत र पूँजी कोष पर्याप्तता १५ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार पीई रेशियो करीब १४ गुणा र प्रतिशेयर आम्दानी रू. १५ रहेको छ ।